S: Kanu miyaanu ahayn SBDC kaliya ee bilowga-ups?
A: Iyadoo SBDC hubaal leedahay macluumaad waxtar leh si kuwa bilaabo ganacsi, our shaqo aasaasiga ah waxaa loo dardar-ka iman kara koritaanka sare ee ganacsiga ee hadda jira oo soo baxaya ee, si ay u noqdaan hal abuur leh oo dheeraad ah oo tartan.
S: Waa maxay noocyada arrimaha ganacsiga ha kaa caawin?
A: adeegyada kartoo yihiin, by koox la taliyayaal ganacsi xirfad la soo diyaariyeen kala duwan oo baaxad leh oo ah aqoonta iyo khibradda. Waxaan shaqada aan kuu sameeyo, Laakiin waxaannu idinku xooji macluumaad iyo khayraadka in aad u baahan tahay. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah meelaha ay la taliyayaasha naga siiyaan talo ku haboon oo macquul ah:
horumarinta qorshaha Business
Helitaanka Baakadaha caasimada oo amaah ah
maamulka socodka Cash iyo falanqaynta dhaqaale
Xisaabaadka iyo Quickbooks
Marketing iyo suuqa cilmi
Website-ka iyo bulshada warbaahinta
Gadashada ama iibinta ganacsi
Noqda-agagaarka kaalmo ganacsiyada Dhibaataysan
NOTE: SBDCs ma bixin karaan talo sharci ah shaqsi ama ku lug leh xisaabaadka Dawladda, oo ay ku jiraan haya'ad talo canshuurta.
S: Ma adeegyada aad lacag la'aan ah?
A: Haa. Absolutely. Really. Thanks to taageerada laga xoreeyo dalka ah. Maamulka Ganacsiga yaryar oo lacag tallaabadaas ka saaxiibada gobolka. lacagta magaceed laga yaabaa in lagugu soo dalaco tababarada si ay u daboosho kharashka la xiriira ku hadla, qalabka ama khafiifa.
S: Maxaa la taliye ii samaynayo?
A: Marka aan helno Codsiga aad buuxisay Adeegyada, la taliyaha kula soo xiriiri doono sida ugu dhaqsaha badan, guud ahaan dhowr maalmood oo shaqo gudahood. Kulanka hore aad, taliye aad dib u eegi doona qorshahaaga ganacsi, soo jeedinta ama u baahan, go'aansado hab wax talaabo oo ay aqoonsadaan meelaha in kasta oo idinka mid mas'uul ka ah dhamaystirka noqon doonaa.
Waxaad filan kartaa in dhammaan macluumaadka lahaansho la wadaago la taliye SBDC aad loo hayn doonaa si qarsoodi ah oo la heli karaa si SBDC keliya aawadood oo ah gargaar dheeraad ah. SBDC ma muujin doonaa macluumaadka xiriirka ee qof kasta oo ama ganacsi oo aan ogolaansho ka milkiilaha ganacsiga(s) ama haddii sharcigu u baahan yahay.
S: Ma jirtaa xad ku saabsan inta jeer ee waxaan ka arki kartaa la taliyaha?
A: SBDC ma damaanad qaadi waqtiga waxay qaadan kartaa si ay u dhamaystiraan adeegyada. bogaadiyay Tashiga caadi ahaan sii furan ilaa iyo inta ay labada dhinacba dareemaan la sameeyey horumar qiimo. Wada-shaqaynta waxaa xaddidi kara waqti ama caqabado miisaaniyadda iyo baahida joogtada ah ee adeegyada SBDC ah.
S: SBDC ma bixiyaan maalgelinta?
A: SBDC ma bixiyaan maalgelinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kaa caawiyo sidii aad u qiimeeyaan waxa aad u baahan tahay iyo in la garto ilo ku habboon. Waxa kale oo aanu kaala talin kara sidii loo hagaajin lahaa qorshahaaga ganacsi iyo codsiga amaah.
S: Sidee baan u maal aan bilaabista ganacsi?
A: Xirid lacag kuu gaar ah oo inta badan waa talaabada ugu horeysa. Waxaa hubaal ah waa tilmaame ugu fiican ee sida dhab ah oo adiga kugu saabsan ganacsigaaga yihiin. Halis lacag kuu gaar ah siinaysaa kalsooni dadka kale in ay maal-aad ganacsi. laga yaabaa in aad rabto in aad ka fiirsan lammaane maalgelinta dheeraad ah.
Ganacsiyada intooda badan waxaa lagu maalgeliya ka mid ah isku-dar ah sinaanta milkiilaha ee (maalgashiga milkiilaha ee) oo amaah ah oo ganacsi. Haddii qofka ganacsadaha ah ayaa doonaya heshiis amaah ah ganacsi, bangi kirjasto caadi rajaynayo in ugu yaraan 10 – 20 boqolkiiba oo ka mid ah dollars loo baahan yahay in ay ka yimaadaan ganacsadaha. Banks kala duwanaan karaan si xooga ku dhaqanka daynta ay.
S: Maxaa ku saabsan deeqaha?
A: Inkasta oo waxa laga yaabaa in aad maqashay, Deeqaha la siiyo si ay u bilaabaan baaritaan waa mid aad u dhif ah.
deeq ganacsiga qaarkood waxaa laga yaabaa in la heli karo iyada oo loo marayo barnaamijyada gobolka iyo federaalka, iyo sidoo kale ganacsiga gaarka ah, cilmi & horumarinta, ganacsi farsmada heerka sare ama meelaha sare oo khaas ah. Deeqahani waxay sida caadiga ah ma aha lacag oo lacag la'aan ah, oo u baahan karaa qaataha u waafaqayaan lacag ama isku deeqda la noocyada kale ee maalgelinta. Inta ay deeq kala duwan ee la heli karo la ganacsi kasta iyo deeq kasta.
deeqaha dawladda waxaa taageera dollars canshuurta aad ah oo inta badan ku xidhan ajendayaasha hay'ad gaar ah sida Department of Energy ama Waaxda Beeraha. Sidaa darteed, ay u baahan yihiin waafaqsanaanta iyo warbixinta tallaabooyinka aad u adag si loo hubiyo in lacagta si fiican loo soo qaatay. Deeqaha caadi yihiin ururada samafalka iyo waxbarashada, ma-doon ganacsi. Ogeysiisyada deeqaha ka muuqan doontaa grants.gov.
S: Sidee baan ku heli karaa amaah Sba ah?
A: SBA ma dhigi deynta tooska ah; waa in aad la bangi shaqeeyaan. Waxaad u malayn kartaa of SBA sida heer ka sarreeya bangigaaga la siinaya dhiirigelin si aad bangiga si ay u fududaato si aad u hesho maalgelinta deynta. Baanka ayaa kaalin weyn ka qiimaynta codsiga amaahda iyo maamulka amaahda. heshiiska bangiga ee loo baahan yahay ka hor inta SBA ka qayb doonaa.
S: Sidee muhiim u yahay score aan credit markii layga doonaya amaah ganacsiga?
A: Score credit amaahdaana A waa muhiim waxana ansixinaya amaah ganacsiga. Inkasta oo ay jiraan marmar ka reeban, deyn ugu rabnaa score credit of a 650 ama si fiican u amaah ganacsiga. Waxaa intaa dheer, kicitaan dhawaan (toddoba sannadood ee la soo dhaafay) had iyo jeer waa wax lagu turunturoodo.
S: Ma inaan aragnimo u leedahay ganacsiga aan ka fiirsanayay ahay si ay fursad guul macquul ah?
A: Runta, waxaa jira heerka a failure sare ganacsiyada bilowga ah. ganacsatada Successful sida caadiga ah waxay leeyihiin waxgarasho adag ee isku biimeynta cusub. Taas macnaheedu waa in ay ama xubnaha kooxda maamulka ay ku shaqeeya ganacsi la mid ah ka hor, ama in ay haystaan ​​xirfadaha gaarka ah iyo xiriirada in awood guul. qalmay guusha waxaa ay noqon doontaa wax badan ka weyn haddii aad qaadato on halista in aad fahamto. Haddii aad doonaysid in aad u baahan tahay si amaah ah si aad u hesho ganacsiga bilaabay, deyn ugu xoogan u meyno in aad la kulantay ee ganacsiga cusub.
S: Waa kuwee-taliyeyaal furaha ugu muhiimsan ee aan ganacsiga?
A: -Taliyeyaal Key waa in uu aqoon ku saabsan arrimaha ganacsiga yaryar ee guud iyo saabsan nooca gaarka ah ee ganacsiga ee gaarka ah. In ka badan shixnadda dheer, inaad ka faa'iidi doontid, kuwaas oo la-taliyeyaal isku halleeyey: xisaabiye, qareen, Wakiilka caymis oo banker. Sidoo kale waa inaad ka mid ah la taliye SBDC aad.
S: Yaa maal SBDC ah?
A: Minnesota SBDCs waxaa taageera isku dhafka ah ee lacagaha ka xoreeyo dalka ah. Small Business Administration (Sba), State of Minnesota (DEED) iyo lacag ka-hawlgalayaasha badan oo taageero gobolka tallaabadaas. The South Central Minnesota SBDC waxaa sidoo kale ay taageerayaan our ciidankii, Minnesota State University, Mankato.